Amaanka Lionel Messi oo aad loo adkeeyey kadib markii laqabtay Ruux Haween ah oo dooneysey? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Amaanka Lionel Messi oo aad loo adkeeyey kadib markii laqabtay Ruux Haween ah oo dooneysey?
Amaanka Lionel Messi oo aad loo adkeeyey kadib markii laqabtay Ruux Haween ah oo dooneysey?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 1:11 AM Wararka ka imaanaya dalka Maraykanka ayaa sheegaya in aad loo adkeeyey amaanka Hotelka uu daganyahay Cayaaryahanka dalka Argentina ee Lionel Messi kadib markii la helay Warar ku saabsan Cabsi dhanka amniga ah oo ku saabsan Xulka Argentina Gaar ahaan Lionel Messi.
Booliska ayaa sheegay in Hotelka uu Magaalada Chicago kadaganyahay Xidiga Messi laga qabtay Ruux haween ah oo iska soo dhigtay qof uu labalansayahay Cayaaryahanku dooneysana in ay la Seexato balse baaritaan ka dib la ogaaday in ay dooneysey in ay Waxyeelo u geysato Cayaaryahanka dalka Argentina.
Warka ayaa intaa Waxa uu ku darayaa in labadalay baskii Xulka qaranka Argentina loona sameeyey ilaalo dheeraad ah Waxaana laga Cabsi qabaa sida lasheegay in Wax yeelo loo geysto Cayaartoyda dalkaas Gaar ahaan Cayaaryahan Messi.